admin, Author at Jubbaland TV - Page 3 of 233
Yaa Ku Guuleystay Abaalmarinta laacibkii ugu fiicnaa bishii September ?
Kubad qaabeeyaha Kooxda Chelsea Eden Hazard ayaa ku guulaystay abaalmarinta Laacibka bishii September, kadib markii uu Kooxdiisa ka Caawiyay in hogaanka Horyaalka ay la qabato Kooxaha Manchester City iyo Liverpool. Hazard bishii September goolal ka kala dhaliyay Bournemouth iyo Liverpool, halka
Kooxda Kubada Cagta ee Inter Milan ayaa si cad u sheegtay in aysan waqti ku lumin doonin saxiixa kubad qaabeeyaha dhexe ee Real Madrid Luka Modric. Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka Talyaaniga’ Agaasimaha waaxda Ciyaaraha ee kooxda Nerazzurri Piero Ausilio ayaa si cad u xaqiijiyay in aysan ku fekeraynin in waqti ay ku […]
Manchester United ayaa doonaysa in qandaraas cusub ku abaalmariso Cayaariyahan Juan Mata, inta lagu guda jiro bishan, sida ay sheegayaan wararaka. 30-sano jirka reer Spain Mata ayaa hishiiskiisa Kooxda Old Trafford waxaa uu ku eg yahay dhamaadka ololahan. Mata ayaa diyaar u ah in uu wadahadalo la furto qaar ka mid ah Kooxaha qaarada Yurub, […]
Daafaca dhexe ee Kooxda Chelsea Gary Cahill ayaa qiray in uu doonayo u dhaqaaqista Kooxda Manchester United, ka hor bisha Janaayo. Sida ay ku waramayso Jariirada Tuttosport’ Cahill ayaa ku jira waa yihiisii u danbeeyay ee kalcada Stamford Bridge, isagoo albaabada u furay Kooxaha doonaya adeegiisa. Cahill ayaa dareemaya in Blues uu ku dulman yahay, […]
Xidigee hore kooxda Heegan Mahad Meykon ayaa kooxdiise hore ka ciribtiray koobka xiisaha badan General Daa’uud, isago horkacaya naadiga Saxafi Fc. Kooxda Saxafi Fc ayaa dhabaha marsiisay labada kooxod ee Ciidanka Horseed ayee hore heerka Guruup-yada isku soo arkeyn, xili ay galabta oo ay labo cad ka kala dhigtay Heegan Fc. Goolhaye Abshir ayaa noqday […]
Heegan Oo Galabta Dhulka Lagu Jeeda Xili Ay Iska Qaasarisay Afar………………….
kulan xiiso badan ayaa galabta laga ciyaaray tartanka General Daa’uud kaa oo dhaxmaraya kooxaha Heegan iyo Saxafi Fc, Ciyaarta ayaa ka dhacday garoonka Banadir Stadium. Ciyaarta ayaa aheyd mid ka tirsan wareega Sideed dhamaadka tartanka General Daa’uud. Kulanka waqtiga caadigeysa wuxuu ku soo dhamaaday bar baro 2-2- xili hal daqiiqo la iska dhaliyay […]